ब्यक्तित्व - Pahilo News
सूर्य थापा प्रमुख नेताहरूसमेत विषयको गम्भीरता र गहिराइमा नपुगी सार्वजनिक खपतका लागि प्रिय कुरा गरेर लोकप्रिय हुन खोज्नु आवश्यक छैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गराइएको छ। अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गरेको होइन। त्यसैले, दर्ता भएकै आधारमा आकाश खसिहालेज..
काठमाडौँ, १६ जेठ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ज..
काठमाडौं । तपाइँ हास्य कलाकारको प्रस्तुति अगाडि कस्तो मूडमा हुनुहुन्छ ? सहज जवाफ..
शान्ता सिंह पुत्रवियोगमा थिइन् । कान्छो छोरा बितेको पाँच महिना मात्र भएको थियो ।..
नेपालका ठूला व्यवसायीहरुले मासिक ६० हजार तलब दिन थालेपछि अजितकुमार यादवलाई आजभोल..
१७ महिना पुरानो तस्बिर तान्दै, अञ्जु पन्तले बाइबल बाँडेको भ्रामक हल्ला चलाउँदै
काठमाडौं । चर्चिक गायिक अञ्जु पन्त क्रिश्चियन हुन् । यसमा दुविधा छैन । अञ्जु पन्तलाई संविधानले दिएको अधिकार हो, यो । किनभने, नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई रोजेको धर्म मान्ने अधिकार दिएको छ । अञ्जु पन्तले मन परेको धर्म मानिन् । यो उनको अधिकार हो । अनि, आफूले मन परेको धर्मबारे बोल्नु पनि फरक कुरा […]
काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले नेता आनन्दप्रसाद पोखरेललाई ३ नम्बर प्रदेश संगठन कमिटीमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय(हाईकमाण्ड)को बैठकले पूर्व पयर्टन मन्त्रीसमेत रहेका पोखरेललाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । यससँगै पोखरेलले पार्टी एकीकरणपछि ३ नम्ब..
१३ औँ पुण्यतिथिको सम्झनामाः निर्दयी काल जसले पूर्वको शिक्षाको ज्योती निभायो !
२०३९ सालदेखि शिक्षाको ज्योति बालेर समाजमा अक्षरको उज्यालो बाड्ने एक होनहार कर्तव्य निष्ठा गुरु उद्धव बहादुर नेपालीलाई निर्दयी कालले असमयमा उठायो जो हृदयबिदारक र अत्यन्त दुखद छ । आफ्ना ससुरा बाको अन्त्यस्टिमा भाग लिएर शोकाकुल अवस्थामा फर्कदै गर्दा कालको रुप सन्जय कामीले चलाएको मोटरसाइकलले एया पनि भन्न नदिई ढाल्यो कहिल्यै नउठ्ने ग..
करेण्ट लागेर एकको मृत्यु, अर्का घाइते
भक्तपुर, ११ भदौ । भक्तपुर नगरपालिका–१० कमलविनायकमा करेन्ट लागेर आइतबार साँझ एकको मृत्यु भएको छ । घटनामा एक जना घाइते भएका छन् । घाइतेको काठमाडौँ छाउनीस्थित नेपाली सेनाको सैनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । कमलविनायकस्थित पाइपलाइनस्थित नाती प्रजापतिको निर्माणाधीन दुई तल्ले घरको छतमा जस्ता राख्न फलामको पाइप उठाउनेक्रममा पाइपल..
मानवीय व्यक्तित्वको गहिरो जानकारी राख्ने कारनी गोल्डम्यानले मानवीय जिन्दगीको सूक्ष्म छानविन गर्दै एउटा पुस्तक लेखेका छन्, ‘हाउ टु फाइन्ड अन सक्सेज’ । अर्थात् आफ्नो सफलता कसरी पाउने ? उक्त पुस्तकमा उनले भनेका छन् कि, ‘सफलता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो । मानिस यसकारण जन्मिएका हुन् कि, उसले आफ्नो सफलता हासिल गर्न सकोस् । यदि अहिलेसम..
माओवादीबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने महेश्वर दाहाललाई सकेसम्म खसालेर र उनको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेर प्रस्तुत गरिएको छ । आफूलाई मन परेका मानिसलाई तथ्यविपरीतका कुरा लेखेर भए पनि महत्वपूर्ण देखाउने कोसिस गरिएको छ, जुन थाहा पाउने मानिसले उजिरको बौद्धिकतामाथि मात्र होइन, इमानदारीमाथि पनि सहजै प्रश्न उठाउँछ ।
उर्लाबारीका लक्ष्मीनारायण ३१ वर्षदेखि लगातार जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत जितेपछि धिमालले आफ्नो वडामा पहिलादेखि राख्दै आएको वर्चश्व कायम नै राखेका छन् । धिमाल २०४३ देखिको स्थानीय निर्वाचनमा लगातार निर्वाचित हुँदै आएका हुन् । २०४३ सालमा तत्कालीन गाउँपञ्चायतको जनपक्षीय सदस्यमा निर्वाचित भएका धिमाल बहुदलपश्चात् लगातार वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।
आजाद बीपीलाई भेट्न चाहनु हुन्थ्यो
उहाँ महात्मा गान्धी, सुभासचन्द्र बोस, भगतसिंह र चन्द्रशेखर ‘आजाद’ लाई मन पराउनुहुन्थ्यो । त्यसताका भारतमा चारु मजुमदार र कानु सान्यालहरूले चलाएको नक्सलवादी आन्दोलनले उहाँलाई निकै आकर्षित गरेको थियो ।
काँग्रेसको कार्यकर्ता भनेर प्रदीपले टेलिफोन नै दिन चाहेनः राधाकृष्ण मैनाली
‘माथि’ बाट ‘जडान नगर्नू’ भन्ने अर्को आदेश आएछ भनेर बस्नेत पुनः मकहाँ आए । मैले प्रदीपलाई तुरून्त टेलिफोन गरी के भएको भनेर कुरा राखें । प्रदीप मसँग “आरकेजी तपाईंले मलाई ढाँट्नुभयो” भन्दै पड्किन थाले । उनको तर्क थियो, “एमाले भएर कांग्रेस कार्यकर्ताका लागि सिफारिस गर्ने ? थाहै नपाई बित्थामा मैले तोक लगाइदिए“ । तर हाम्रा कार्यकर्ता ..
यो पञ्चायतकालको कुरा थियो । दरबार र राजारानीको ऐतिहासिक योगदानको गुनगान गाउने ‘मालती मंगले’ जस्ता नाटकमात्रै प्रदर्शन गर्न दिने तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले कसरी दुर्गालालको सामन्ती शोषणको धज्जी उडाएको नाटक मञ्चन गर्न दिन्थे ? पञ्चायतकालीन प्राज्ञहरु कहाँ त्यति उदार थिए र ? भन्छन्, ‘मैले त्यतिबेला लेखेका नाटकहरु कल..
पञ्चायतमा रिपोर्टिङ गर्दा मैले एकपटक फलानो दिन बजेट आउने भनेर समाचार लेखेँ । कति आउने, कस्तो आउने भन्ने प्रश्नै थिएन । तर पनि उनीहरुले सहेनन् । रासस र मलाई कारबाही गर्ने भने । अनि, मैले भनेँ, यो रिपोर्टिङ मैले गरेको हुँ । कारबाही म भोग्छु, थुनिन्छु । त्यसपछि मिल्यो । कारबाही गर्छु भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालय थियो । पञ्चायत क..
भाषा र साहित्यको प्रबद्र्धनमा आजीवन लागेका बरिष्ठ साहित्यकार कमलमणि दीक्षितको ८८ वर्षको उमेरम आज राती निधन भएको छ । उनीप्रति श्रद्धाञ्जली दिन विहानैदेखि ललितपुरको पाटनढोकास्थित निवासमा भीड लागेको छ ।
पाठक राजा होइनन्, ठूला पाखण्डी हुन्ः विनोद मेहता
पाठकहरु विरोधाभासी हुन्छन् । उनीहरु प्रायसः सिकाउन खोज्छन् । निरन्तर नकारात्मक समाचार दिइरहे पनि सकारात्मक समाचारप्रति रुचि जगाउन चाहँदैनन् । सर्वेक्षणहरुका अनुसार, पाठकहरु नकारात्मक समाचार, सनसनी मच्चाउने समाचार, आपराधिक समाचार र हिंसा र भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचारमा रुचि राख्छन् । पाठक राजा होइनन्, उनीहरु ठूला पाखण्डी हुन् ।
दासढुंगा काण्डपछि रमेशनाथ पाण्डेले राति ९ बजे ‘दृष्टि’मा मलाई टेलिफोन गरेर ‘श्री ५ महाराजाधिराजले संविधानको यति धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहिबक्सेको छ’ भने ।
०७० सालको निर्वाचन पनि महन्थ ठाकुरका लागि सुखद रहेन । अघिल्लो निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसम्म भएका उनी यसपटक तेस्रो स्थानमा मात्र धकेलिएनन्, आफैँले राजनीतिमा लगाएको र एउटै स्रोत भएको अमरेशकुमार सिंहबाट पराजित भए ।
कसले गर्‍यो यति गम्भीर लापरवाही ?
गायत्री नेपाल त कुटनीतिक राहदानीबाहक हुनुहुन्थ्यो, छिटै सबैतिर कुराकानी भयो र समस्या समाधान भयो । तर, त्यस ठाउँमा साधारण राहादनीबाहक अरु कोही नेपाली भएको भए यसको अवस्था के हुन्थ्यो र त्यसको जिम्मेवार को हुन्थ्यो ?
उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल एमालेका स्थापित वैचारिक नेता हुन् । एमालेका नेता–कार्यकर्ता मात्रै होइन, अरु दलमा समेत दुवैको वैचारिक क्षमताको प्रशंसक छन् । अध्ययन, विश्लेषण, लेखन र वाककलाबाहेक दुवैले ‘वैचारिक मास लिडर’को छवि बनाएका छन् । पार्टीभित्र हुने अन्तरसंघर्ष होस् या महाधिवेशन, तीन दशकदेखि कहिल्य..